Ehe. Isu tiri nyanzvi yekugadzira yakarongedzwa mumitambo yekutandarira uye inoenderana kubva 2010.
2. Ndeipi yako yekubhadhara temu?
Yedu yenguva dzose yekubhadhara temu ndeye makumi matatu muzana seyedipo, iyo t / T yakaenzana isati yaendeswa. Yekuenzanisira mhando, tinobvuma kubhadharwa nePayPal, Western Union, MoneyGram.
3. Ndeipi yako yekuendesa nguva?
Iyo yekuzvitakura nguva inoenderana nehuwandu hweodhi yako uye kuti mangani marongero atiri kuita. Kazhinji nguva yekuzvitakura inenge mazuva 15-30. Dzimwe nguva isu tinofanirwa kuwedzera nguva yekuendesa sezvo isu tine mamwe mairairo makuru kubva kuhurumende. Kana iwe uchida mamwe samples, tinogona kuipedza mumazuva manomwe kana iwe uri nekukurumidzira.
4. Ndeipi tsika yekuchengetedza kune zvigadzirwa zvako?
Tichakurukura nezvekuchengetedza tsika (ASTM F1487, EN1176, EN71, EN 16630) kana kugadzira, kugadzira, kugadzira uye kuisa zvigadzirwa. Zvigadzirwa zvedu zvakawana zvitupa zvakawanda nekambani yedu uye nevatengi.
5. Unogona kutumira zvigadzirwa kunzvimbo yangu?
Chokwadi, tinogona kukubatsira kuronga kuendesa kune yako nyika. Asi kazhinji kazhinji isu tinoronga kuendesa kune vatengi vechiteshi chepedyo munyika yavo uye vatengi kuronga kutakurwa kubva kuchiteshi kuenda kunzvimbo yavo.
6. Ini ndinogona kuisa zvigadzirwa pachangu?
Ehe. Isu tichakupa iwe yakadzama yekuisa yekuraira. Vese vatengi vedu vanogona kuisa nzvimbo yekutamba ivo pachavo nerubatsiro kubva kwatiri. Asi kune nzvimbo huru yekutamba yemukati inopfuura mazana maviri emamirimita mativi, zviri nani kukumbira mushandi wedu kuti akubatsire iwe kuiisa. Zvimwe mutengo unenge wakakwira zvishoma asi uchapfupisa nguva yacho zvikuru.
Kuti uwane rumwe ruzivo, gamuchirwa kuti utitane nesu ikozvino!